घटना भएको १३ दिन पछि खुल्यो सुष्मिताको ज्यान लिनुको रहस्य, ससुराले पैसाको लागि मात्र होइन यौन प्यास मेट्न नपाउंदा भएको थियो घटना ! त्यो रात सुस्मिता खाना खाँदै थिइन् त्यसपछि …. पुरा पढ्नुहोस ससुरा र नन्दले प्रहरीलाई दिएको यो बयान ! – live 60media
घटना भएको १३ दिन पछि खुल्यो सुष्मिताको ज्यान लिनुको रहस्य, ससुराले पैसाको लागि मात्र होइन यौन प्यास मेट्न नपाउंदा भएको थियो घटना ! त्यो रात सुस्मिता खाना खाँदै थिइन् त्यसपछि …. पुरा पढ्नुहोस ससुरा र नन्दले प्रहरीलाई दिएको यो बयान !
← कमाउने छोरो साउदी अरवमा अस्ताए, घरमा शव पनि नआउँदा आमा, श्रीमती र छोराछोरिको आशु रोकिएन
बर्दियाका जनताले बाटैमा रोपे धान, फल्यो भने नगर प्रमुख र जनप्रतिनीधिहरुलाई सित्तैमा दिने गरे घोषणा →